श्री’मान वि’देशमा, छो’रालाई बा’थरुममा थु’नेर प’रपुरुषसँ’ग अ’वैध स’म्बन्ध रा’ख्दै ग’र्दा रं’गेहात स’मातिएपछी ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/श्री’मान वि’देशमा, छो’रालाई बा’थरुममा थु’नेर प’रपुरुषसँ’ग अ’वैध स’म्बन्ध रा’ख्दै ग’र्दा रं’गेहात स’मातिएपछी !
कुनै बेला सानै उमेरमा यति ठू’ला ठूला कुराहरुको अनुभब हुन्छ कि त्यसपछि जिन्दगीलेनै धेरै सिकाउछ भन्दा पनि फरक नपर्ला । भोजपुरका यि बाउछोरा अहिले आफनी आमा या भनौ श्री’मती खो’ज्दै काठमाडौ आईपुगेका छन । श्री’मतीका क’र्तुतहरु यस्तासम्म रहेका छन कि बि’देशमा रहेका बेला यता छोरालाई बा’थरुममा थु’नेर अं’कलस“ग य’सरी शा’रीरिक स’म्पर्क ग’रेको समेत छो’राले रं’गेहात स’मातेछन । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
केही समय देखि काठमाडौ ठ’मेलको कुनै गेष्ट हाउसमा कार्यरत रहिछिन यि म’हिला त्यसपछि यि’नका का’ला क’र्तुतहरु एकपछि अ’र्को गर्दै बा’हिर आए । कहिले आफनै अं’कलस“ग रं’गेहात स’मातिईन त कहिले मो’जमस्ती गर्दै गरेको बे’लामा स’मातिईन ।
आफनै ८ बर्षिय छोराले समेत स’मात्दा पनि यिनले य’स्तो ग’र्न छो’डिनन । बुढा बिदेश भएको फा’इदा उ’ठाउदै यस्तो का’र्यहरु गरिरहिन । यि बाबुछोराको नाम हो दुर्गा बस्नेत र प्रज्वल बस्नेत, अहिले श्रीमती फ’रार छिन खोज्दै काठमाडौमा आएका बाबुछोरा यसरी भौ’तारिदै खोजिरहेका छन । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***